Yaa lala xiriirinayaa dilka gabdhii Soomaalida ee Mombasa? | Xaysimo
Home War Yaa lala xiriirinayaa dilka gabdhii Soomaalida ee Mombasa?
Booliiska magaalada Mombasa ee gobolka Xeebta ee dalka Kenya ayaa baaraya shabakad tahriibinta dadka ah, oo la rumeysan yahay inay ka dambeysay dilkii gabar Soomaali ah loogu geystay gudaha magaaladaas.
“Waxaa ina soo gaaray cabashooyin ah in dad loo tahriibiyay dalalka sida Soomaaliya, Suuriya iyo Yemen iyaga oo aan ogeyn. Tusaale ahaan waxaa jira afar haween oo loo ballan qaaday shaqooyin dibadda ah sida Sacuudiga, waxayna arkeen iyaga oo ku sugan Soomaaliya.”
Markii dambe waxaa laga soo qabtay magaalada Kangundo, xilli ay isku dayeysay inay u baxsato magaalada Nairobi, maalin kaddib markii xaafadda Dongo Kundu bypass laga helay Najma oo miyir daboolan.